Shir ku saabsan Adkaynta Nabad-gelyadda oo u furmay xubno ka kala socday Somaliland iyo Soomaaliya | Somaliland.Org
Shir ku saabsan Adkaynta Nabad-gelyadda oo u furmay xubno ka kala socday Somaliland iyo Soomaaliya
December 9, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Shir hawleed ku saabsan adkaynta nabadda iyo xasiloonida dalka oo ay ka qayb qaadanayaan xubno ka kala socday Somaliland iyo Soomaaliya, socona doona muddo todoba maalmood ah ayaa maanta ka furmay Hotel Imperial ee Magaalada Hargaysa.
Wasiirrada wasaaradaha beeraha Faarax Cilmi Geedoole iyo shaqada iyo Arimaha Bulshada Maxamuud Axmed Barre Garaad ayaa ka qayb galay kulan hawleedkaasi oo sidoo kale ay ka qayb qaadanayeen hay’adaha iyo ururada wadaniga ah ee wada shaqaynta la leh hay’adaha ammaanka Somaliland.
Mas’uuliyiintii halkaas ka hadashay ayaa dhamaantood waxa ay ka hadleen muhiimadda ay aadamaha u leedahay xasiloonida iyo deganaanshuhu.
sida la ogyahay kulankan oo sanadkiiba mar la qabto ayaa waxa uu yahay kulankii sadexaad ee Somaliland lagu martigeliyo.waxaana Furitaankii kulankaasi ay wasiirada wasaaradaha beeraha iyo shaqadu ku dheeraadeen faahfaahin ay ka bixiyeen marxaladihii kala duwanaa ee ay JSL u soo martay nabadda ay manta ku noolaanayso iyo hanaanka dimuqraadiga eek a hir galay.
Previous PostKomishanka Maamul Wanaagga oo warbixin ku saabsan maalinta la dagaalanka Musuq maasuqa soo saarayNext PostXafiiltanka Doorashooyinka ee dhamaan doontaa kama firxin doonto Cadowga Somaliland	Blog